Gypsy Soul Flowy စားဆင်ယင် | Buddhatrends
$47.40 $79.00 သငျသညျ (40% Save$31.60)
ကြည်းတပ်စိမ်းလန်း / S က ကြည်းတပ်စိမ်းလန်း / M က ကြည်းတပ်စိမ်းလန်း / L ကို ကြည်းတပ်စိမ်းလန်း / XL ကြည်းတပ်စိမ်းလန်း / XXL ကြည်းတပ်စိမ်းလန်း / XXXL ကြည်းတပ်စိမ်းလန်း / 4XL ကြည်းတပ်စိမ်းလန်း / 5XL စပျစ်ရည်ကိုနီ / S က စပျစ်ရည်ကိုနီ / M က စပျစ်ရည်ကိုနီ / L ကို စပျစ်ရည်ကိုနီ / XL စပျစ်ရည်ကိုနီ / XXL စပျစ်ရည်ကိုနီ / XXXL စပျစ်ရည်ကိုနီ / 4XL စပျစ်ရည်ကိုနီ / 5XL အဖြူ / S က အဖြူ / M က အဖြူ / L ကို အဖြူ / XL အဖြူ / XXL အဖြူ / XXXL အဖြူ / 4XL အဖြူ / 5XL Black က / S က Black က / M က Black က / L ကို Black က / XL Black က / XXL Black က / XXXL Black က / 4XL Black က / 5XL ဘရောင်း / S က ဘရောင်း / XL ဘရောင်း / 4XL ဘရောင်း / 5XL ဘရောင်း / L ကို ဘရောင်း / M က ဘရောင်း / XXL ဘရောင်း / XXXL
သင်တစ်ဦးလမ်း လွဲ. ရောက်နေတယ်ဆိုရင် gypsy soul looking for the perfect dress, this flowy dress is for you! Available in5earthy colors such as black, green, wine red, white and brown, this short sleeves maxi sundress is also available from size small to 5XL.
, G *** ဈ
strepitoso! Bello il gioco dei veli sovrapposti, အီး ben rifinito ။ စူပါ!
T က *** ဎ
Симпатичноеплатье, свободное, какяихотеланамоипараметры 108-97-127, рост 172 см။ Немногонеаккуратныешвы။ Проймывеликоваты။ Осоставетканисудитьнемогу, какаятосмесовая, приятнаяктелу။ Доставкаоченьбыстрая -2 недели။
ငါ *** ဏ
ясчастлива! давнохотелаплатьевтакомстиле, многоперечиталаотзывовиперебраламоделей။ 92-74-96, рост 162 параметрыМна။ всеотлично, ничегоненужнопеределывать။ проймы - норм, бельеневидно, какмногиеписали။ цветсовпадаетсзаявленнымизаказанным.длинатожевсамыйраз။ единственнонашеюпросятсякакиенибудьобъемныебусы။ рекомендуютоварипродавца! однозначно! хочууэтогопродавцазаказатьдлямамытакоеплатье။ доставкамесяцвКазахстан, чтонеплохо။
D *** ဎ
အဆိုပါဂါဝန်, အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့သည်ထည်ပုံ, မတစုံတခုမြှမဆိုင်တိုင်ကြား, ပြီးသား, နှောင့်နှေးပုံမှန်ဖြစ်ပါသည်, ပေးပို့အကြောင်းကို, ဒီတူညီတဲ့ဆိုင်အတွက်စာတိုက်ကတခြားဂါဝန်ကိုဝယ်ယူခဲ့သကဲ့သို့အရောင်ဖြစ်ပါသည်, ကောင်းသောကြီးမားပြီးအဆင်ပြေဖြစ်ပါသည် အဆိုပါဘရာဇီးဂါဝန်ဖြစ်ပါတယ်အကောင်းဆုံးအခြေအနေများအတွက်သပိတ် kkkk သို့ရောက်သည့်အခါအဓိကအားဖြင့်အဆိုပါဂါဝန်နာရီအနည်းငယ်ဝယ်ယူနောက်သို့စေလွှတ်ခဲ့သည်အံ့သြစရာ, ဆိုင်ယုံကြည်စိတ်ချရသော, အဘယ်သူမျှပြဿနာခဲ့ဘဲ, အဂါဝန်ကဒီမျှချွတ်ယွင်းခြင်း, ငါ့အမိချစ်စဖွယ်ဖြစ်ကြ၏ ကြှနျမ, အကြီးမားဆုံးစာရငျး pedimos, ဒါပေမယ့်ယခုမှသာ uns ချိန်ညှိပြုပါနေသည်အပေါင်းတို့နှင့်တကွထွက်အလုပ်လုပ်ရပ်ပါလိမ့်မယ်။ store မှာအားကိုးနိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးက *** ကို C
Excelente calidad က de Tela, Bien confeccionado y က terminado ။
B က *** ဏ
R ကို *** တစ်ဦးက
: P *** တစ်ဦး
အလွန်ကောင်းတဲ့ကို item ။ အရည်အသွေးကောင်း
ဒီစားဆင်ယင် Love နှင့်ရောင်းချသူအကြံပြုပါသည်။ ယနေ့အခြားအရောင်မိန့်နေပါတယ်။ ငါ့မွေးနေ့သောကြာနေ့ကဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ ။
ချစ်စရာစားဆင်ယင်။ ငါသည်ငါ့တွေဆီကနေတိုင်းတာ 3cm များမှာဖြစ်ပေါ်စေငါ့ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်အပေါ်ခဲ့တယ်, ဒါပေမယ့်သူတို့က Tee မှ fit မှထွက်လှည့်, ဒါ M ကနည်းနည်းများလွန်းကြီးတွေဖြစ်ပါတယ် S ရဲ့အခြားအရောင်များအတွက် 96 တဦးတည်းက M နှစ်ခု S ကအမိန့်ထုတ်ပေမယ့်သူ့ရဲ့တစ်ဦးအလွန်ချောင်ကတည်းက စားဆင်ယင် fit, ကမဆိုးပါတယ်။
ချစ်စရာစားဆင်ယင်ကျွန်မတွေဆီကနေတိုင်းတာခြင်း 96m ပင်သော်လည်း S ကိုအမိန့်မှစွန်ဒါပေမယ့်ဿုံကိုက်ညီ :)
တစ်ဦးက *** ဦး
L ကို *** ဎ
ဒါဟာငါ့အဘို့အနည်းငယ်ကိုလည်းကြီးမားပေမယ့်ငါနေတုန်းပဲဒါကြောင့်ဝတ်ဆင်ပါလိမ့်မယ်။ အလွန်ကောင်းသောအရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်း, ပိတ်ချောနှင့်တူခံစားရ၏။3အလွှာ။ ..
J ကို *** ဂရမ်
J ကို *** ဎ
Excellent ကရောင်းချသူအလွန်ကောင်းသော်စားဆင်ယင်။ ကျိန်းသေအကြံပြု
အီး *** Z ကို
Excellent ကအရည်အသွေးကို! သငျသညျခစျြရောင်းချသူကျေးဇူးတင်ပါသည် ငါဆက်ဆက်ဤရောင်းချသူထံမှပိုပြီးအမိန့်မည်!
F ကို *** င
အဆိုပါ picture..i အကြံပြုအဖြစ်အကြီးအ fabric..same
အို *** ဦး
ရုရှားဤစားဆင်ယင်အရွယ်အစား 54 5xl ကောင်းကောင်း။ အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့။ ရှည်လျားသွား၏
V ကို *** r
အီး *** v
အီး *** E နဲ့
အဆိုပါကုန်ပစ္စည်းများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်! အားလုံးအဆင်ပြေတယ်! ဖော်ပြချက်နှင့်အတူလုံးဝကိုက်ညီ! အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရည်အသွေးကို! အစာရှောင်ခြင်းရေကြောင်းနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ထုပ်ပိုး! အားလုံးပျူအကြံပြု! ကျနော်ကျိန်းသေနောက်တဖန်အမိန့်မည်! ရိုးရိုးသားသားနှင့်တာဝန်ရှိရောင်းချသူရှိပါတယ်, ကောင်းတဲ့ !! ကျေးဇူးတင်စကားတာကိုလက်ခံရရှိကုန်စည်များအတွက်! အားလုံးအဆင်ပြေတယ်! ဖော်ပြချက်နှင့်အတူလုံးဝကိုက်ညီ! စုံလင်သောရညျအသှေး! ပို့ဆောင်မှုမြန်ခြင်းနှင့်ထုတ်ပိုးကြီးမြတ်ပါ! အားလုံးပျူကအကြံပြု! ကိုယ်ကျိန်းသေနောက်တဖန်အမိန့်မည်! ကလျောက်ပတ်သောများနှင့်တာဝန်ရှိပေးသွင်းရှိပါတယ်ကောင်းတဲ့ပဲ!
ဂရိတ်စားဆင်ယင်။ ကြီးမြတ်ဆိုင်။ ကျွန်တော်အကြံပြုသည်မှာ
163 စင်တီမီတာအမြင့်နှင့် 65 ကီလိုဂရမ်အဘို့အပြီးပြည့်စုံသော။
ရရှိထားသည့်! အရာအားလုံးဒဏ်ငွေဖြစ်ပါသည်, အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ကိုယ့်အကြီးအ !!! အရာအားလုံးကိုက်ညီ !! ပုံ
ငါ *** r
အဆိုပါစားဆင်ယင်လှပသော .. dovolna ဖြစ်ပါသည်
ငါ *** z
nice စားဆင်ယင်! တင့်တယ်တောက်ပစစ်တပ်အစိမ်းရောင်အရောင်; ကောင်းတဲ့ပစ္စည်း။ အရမ်းကြီးမားတဲ့ဒီတစ်ခါလည်းတစ်ဦးအလွန်သေးငယ်သောနည်းနည်း; အလွန်ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့် flowy ။
Size ကို 54-56 ။ ပဲစူပါရောက်လာတယ်။ ငါသည်ခပ်သိမ်းသောသုံးအရောင်များကိုအမိန့်ပေးခဲ့သည်။ အပေါင်းတို့နှင့်အတူပျော်စရာ။ ကျွန်မအကြံပြုသည်။